एउटै जिल्लामा २४ हजार छोरीहरुको ज्यान लिने कुपोषण • Janaboli
एउटै जिल्लामा २४ हजार छोरीहरुको ज्यान लिने कुपोषण
काठमाडौ । तल्कोट गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया मञ्जु धामीको १० फागुन २०७३ मा मृत्यु भयो । त्यसको ११ दिनपछि उनकी १० वर्षीया बहिनी कल्पना धामी पनि बितिन् । छोरीहरूको मृत्यु हुनुभन्दा एक महीना जति अघि मात्र उनीहरू खानेकुरा नपुगेर रोगाएका हुन् र त्यो बिमारको नाम कुपोषण हो भन्ने थाहा पाएकी आमा पार्वती धामीले भनिन्, “एक वर्षदेखि दुवै जना गल्दै गएका थिए । पछि पेट फुल्न थाल्यो । जीउ सुकेर लौरो जस्तो भयो । धामीझाँक्री र औषधिमूलो गर्दागर्दा थाकिसकेका थियौं । जिल्लामा एक्सरे गर्दा पनि केही देखिएन । पछि मेलविसौना स्वास्थ्य चौकीमा जाँच्दा कुपोषण भएको भनेर औषधि पनि दिए, तर निको भएन ।” स्थानीय विद्यालयमा पढ्ने र कक्षामा सधैं प्रथम हुने मञ्जु कक्षा ४ को परीक्षा सकेर ५ कक्षा भर्ना गर्ने तयारीमा थिइन् भने कल्पना २ बाट ३ कक्षामा जाँदै थिइन् । उनीहरूलाई कडा खालको कुपोषण भएको कुरा मेलविसौना स्वास्थ्य चौकीमा रहेको पोषण सम्बन्धी बहिरंग उपचार केन्द्रले पत्ता लगाएको थियो ।
पाँच वर्षभन्दा माथिकालाई कुपोषण हुँदा दिइने औषधि स्वास्थ्य संस्थामा थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई पाँच वर्ष मुनिका कुपोषित बालबालिकालाई दिइने उपचारात्मक तयारी खाना ९आरयूटीएफ–रेडी फर युज थेरापेटिक फूड० दिएर पठाइएको थियो । पार्वती भन्छिन्, “त्यो बेलासम्म दुवै जना खाना खान नसक्ने भइसकेका थिए । दुई–चार पोका मात्र खाए । सबै औषधि खानै नपाई वितिहाले ।” यस्तै प्रकृतिका घटना यसअघि पनि भएका थिए । कडा खालको कुपोषणकै कारण २०७३ कात्तिकमा बुङगल नगरपालिकाको खिरातडीकी चार वर्षीया करिश्मा कुँवर र पुसमा दुर्गाथली गाउँपालिकाकी तीन वर्षकी अस्मिता जप्रेलको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । मृत्यु हुनुअघि चारै जना बालिका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा संचालित शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम (आईमाम– इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ एक्युट मालन्युटे«सन) को सम्पर्कमा आइपुगेकाले मात्र उनीहरूको मृत्युको कारण कुपोषण नै हो भन्ने पत्ता लागेको हो । स्वास्थ्य संस्थामा नल्याई मृत्यु भएका अन्य धेरै बालबालिकाको मृत्युको मुख्य कारण कुपोषण नै हुनसक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुमान छ ।
आईमाम कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा गरेको बझाङका पाँच वर्ष मुनिका २३ हजार ३७७ जना बालबालिकाको पोषणको अवस्था जाँचमा ३ हजार ५११ जनामा कडा खालको शीघ्र कुपोषण ९ख्याउटेपन० भएको पत्ता लागेको थियो । कुपोषित बालबालिकामध्ये २ हजार २६६ मा मध्यम खालको कडा कुपोषण र १ हजार २४५ मा अति कडा खालको कुपोषण देखिएको कार्यक्रम संयोजक सन्देश राजथलाले बताए । बझाङमा १४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको संख्या ६४ हजार १२३ छ । सबैको परीक्षण नभएका कारण अझै कति बालबालिका कडा खालको कुपोषणको जोखिममा छन् भन्ने यसै भन्न नसकिए पनि ११ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा खालको कुपोषणको जोखिममा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुमान छ । कडा कुपोषण (ख्याउटेपन) सबैभन्दा खतरनाक कुपोषणको प्रकार भित्र पर्दछ । डा. अनुप रेग्मी भन्छन्, “ख्याउटेपन भएका बालबालिकाले समयमै उपचार र हेरचाह नपाउने हो भने जुनसुकै बेला पनि ज्यान जान सक्ने खतरा हुन्छ ।” स्वास्थ्यको भाषामा यसबाहेक कुपोषणका अन्य रूपहरू पनि हुन्छन् । ती हुन्, दीर्घ कुपोषण (पुड्कोपना), कम तौल हुनु तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको कमी । सूक्ष्मपोषक तत्वको कमीले कति बालबालिकाहरू प्रभावित छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क जिल्लामा उपलब्ध नभए पनि बझाङका ४७ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना र २९ प्रतिशत बालबालिकामा तोकिएको मापदण्ड भन्दा कम तौल हुने गरेको पाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । यस्तै ३९.३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता देखिएको राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फोहोरमा खेल्दै गरेका काँडाका बालबालिका
विष्टले भने जस्तै २०७३ पुसयता जानकारीमा आएका कुपोषणका कारण मृत्यु भएका चार वटा घटनामा चारै जना बालिका छन् । यसबाहेक कुनै उपचार नपाई मृत्यु हुने वा औपचारिक रूपमा बाहिर नआउने घटनामा पनि बालिकाकै संख्या बढी हुने स्वास्थ्यकर्मीको बुझाइ छ । दुर्गाथली गाउँपालिकाको सैनपसेला वाइकोटकी शान्ति जप्रेलको घरमा भएको घटनाले यसलाई थप पुष्टि गर्छ । उनको घरमा गएका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पोषण अधिकृतले उनकी तीन वर्षकी छोरी अस्मितालाई कडा खालको कुपोषण भएको पत्ता लगाए । कुपोषित बालिकाको उपचार निःशुल्क गरिदिने भन्दै जिल्ला अस्पतालको पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रमा भर्ना गर्न अनुरोध गरे । छोरीको उपचारको लागि स्थानीय वैद्य तथा धामी झाँक्रीकोमा १५÷२० हजार खर्च गरिसकेको भए पनि निको नभएकाले आफूले छोरी माया मारिसकेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीको अनुरोध शान्तिले वास्ता गरिनन् । श्रीमान चार वर्षदेखि मलेशिया गएको, घरमा ससुरा, आफू, एक छोरी र दुई छोरा मात्र भएकोले कुरुवा बस्दा घरको काम अलपत्र हुने भन्दै उनले छोरीलाई उपचार गर्न अस्पताल पठाउन मानिनन् । पोषण अधिकृत इन्द्र कार्कीले अस्मितालाई उपचारका लागि भर्ना नगरे प्रहरीमा उजुरी गर्ने चेतावनी दिए । त्यसपछि बाध्य भएर शान्तिले छोरीलाई जिल्ला अस्पताल बझाङमा भर्ना गरिन् ।
दुई दिन अस्पताल बसेपछि तेस्रो दिन दिउँसो खाजा खान भनेर छोरीलाई लिएर बाहिर निस्केकी शान्ति फेरि अस्पताल फर्किइनन् । वार्डमा भर्ना भएको बिरामी हराएपछि अस्पतालमा खैलाबैला मच्चियो । उनको खोजी गरिदिन अस्पतालले प्रहरीलाई गुहा¥यो । खोज्दै जाँदा उनीहरू भागेर घर पुगिसकेका रहेछन् । शान्ति सजिलै भन्छिन्, “तीन तीन दिनसम्म अस्पताल बस्दा घरको काम डामाडोल भइसकेको थियो । बुढा ससुराले घर धान्न सक्ने कुरा भएन । मरे मर्ली, बाँचे बाँच्ली भनेर अस्पतालबाट भगाएर ल्याएँ । घर पुगेको भोलिपल्ट मरिहाली ।” उनले अस्पताल जानु पहिला नै छोरी मर्छे भन्ने आफूलाई पक्कापक्की भएकाले अस्पताल लैजान नमानेको बताइन् । २०७३ साल पुस पहिलो साता खिरातडी गाविसकी साढे चार वर्षीया बालिका करिश्मा कुँवरको पनि कुपोषणकै कारण ज्यान गयो । स्वास्थ्यकर्मीले उनको परिवारलाई उपचार गर्न भनेर धेरै सम्झाए । अस्पतालमा गएर हप्तौं उपचार गर्न बस्नुपर्दा घरको काम बिग्रन्छ भनेर परिवारले उपचार गर्न मानेनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रमका पूर्व कर्मचारी डाक्टर सुनिल गजुरेलले भने, “जति सम्झाउँदा पनि परिवारले मानेन । हेर्दा हेर्दै बालिकाको ज्यान गयो ।”
१७ बर्षको उमेरमा तिन बच्चा जन्माईसकेकी बझाङकी बादी महिला
माथि उल्लिखित घटना भएका गाउँबाट सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पताल आउन–जान चार घण्टादेखि एक दिनसम्म लाग्छ । तर, जिल्ला अस्पताल सिमखेतबाट करीब ५०० मिटरको दूरीमा रहेको रिठापाटा गाउँकी तुल्सी नेपालीका तीन छोरीहरू पनि कडा खालको कुपोषणबाट ग्रसित छन् । उनीहरूमध्ये पनि दुई वर्षकी सरस्वतीको समयमा उपचार भएन भने ज्यानै जाने खतरा छ । तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले घरमै गएर पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि तुल्सीले उपचार गर्न मानेकी छैनन् । उनी भन्छिन्, “मेरो जेठो छोरो पनि सानोमा यस्तै थियो । अहिले भारत गएर पैसा कमाउने भइसक्यो । यिनीहरू हाम्रो नाम बेचेर पैसा खान दिनदिनै अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ भनेर हैरान पार्छन् । गाली गरेर पठाएँ र पनि आउन छाडेका छैनन् ।” जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी पोषण अधिकृत सविता शाही ठकुरीले तुल्सीलाई घरमै गएर धेरै पटक उपचार गर्न सम्झाएको तर उनले उल्टै गाली गरेर पठाउने गरेको सुनाइन् । सविता भन्छिन्, “मरे मेरै छोरी मर्छन्, तिमीहरूलाई के खस्खस् भनेर उल्टै हप्काउँछिन् । बच्चीको अवस्था हेरेर दया लाग्छ । डाक्टरहरूले सम्झाउँदा पनि मान्दै मानेकी छैनन् ।”
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार खाद्यान्न अभाव, अशिक्षा, अन्धविश्वास र असुरक्षित खानपान नै यहाँ व्याप्त कुपोषणका कारण हुन् भन्ने कुरा सर्वेक्षणले देखाएको छ । कुपोषितहरूमध्ये पनि आधाभन्दा बढी बालिका रहेको, छोराछोरीमा गरिने विभेदका कारण उपचार नपाउँदा धेरैजसो छोरीको ज्यान जोखिममा रहेको डा। गजुरेलको भनाइ छ । उनले भने, “जिल्लामा उपचार नहुने खालका बिरामीलाई हामी नै खर्च दिन्छौं । उपचार गर्न जाऊ भन्दा पनि मान्दैनन् । घरको काम अलपत्र पर्ने बहाना देखाएर उम्किन्छन् । धेरैजसो कुपोषित छोरीहरूले कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।” घरमा खानपान र हेरचाहमा हुने विभेदका कारण पनि बालिकाहरूमा बढी कुपोषण हुने गरेको छ । दलित महिला संघकी अध्यक्ष आशा विक भन्छिन्, “छोरा भए सुत्केरीलाई मिठोमसिनो खान दिन्छन् र माया गर्छन् । छोरी पाउने आमाको खानपिन र हेरचाहमा खासै वास्ता हँुदैन । जन्मने वित्तिकै आमा नै विभेदमा पर्ने भएकोले बालिकाहरूमा कडा खालको कुपोषण बढी देखिएको हो ।”
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्र पोषणको लागि काम गर्ने कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत रु.८ करोड, गर्भवती महिला र एक हजार दिनभित्रका सुत्केरीहरूको पोषण सुधारका लागि काम गर्ने सुआहारा कार्यक्रमले रु।१ करोड १२ लाख, एकीकृत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम रु.१ करोड १४ लाख, पहल कार्यक्रमले रु.३० लाख ५० हजार र बालपोषण भत्ताबापत रु.३० करोड खर्च भएको छ । यसैगरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मात्र भिटामिन ए, जुकाको औषधि खुवाउने, एकीकृत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि नाममा रु. ७ करोड खर्च गरेको छ । यस बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू यूएसआईडी, प्राक्टिकल एक्सन, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, हेलनकेलर इन्टरनेशनल आदि संस्थाहरूले पनि पोषणको अवस्था सुधार गर्न जिल्लामा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अन्तर्गतका युनिसेफ, एफएओ, यूएनएफपीए, विश्व खाद्य कार्यक्रमको बजेटको अङ्क पनि सानो छैन । सरकारी स्तरबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहलगायतका सरकारी कार्यालयबाट पोषणको नाममा गर्ने खर्चको अङ्क पनि ठूलै छ । सबै कार्यालयले कुल रकमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ‘पोषणसम्बन्धी चेतना जागरण’ मा खर्च गरेको देखाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गतको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका संयोजक हेमन्त शाही भन्छन्, “केही पनि हुँदै नभएको भन्ने त होइन । पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल सन्तोष लाग्ने खालको छैन ।” स्थानीयको आवश्यकतामा आधारित भन्दा पनि गैरसरकारी संस्था र केन्द्रीयस्तरका निकायको चाहनामा योजना बन्ने भएकोले कुपोषणको क्षेत्रमा लागू भएका कार्यक्रमहरूले वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
बझाङ जिल्लामा रहेका प्रजनन् उमेरका महिलामा पनि कुपोषणको अवस्था भयावह छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार बझाङ जिल्लाका प्रजनन्शील उमेरका ३९।२ प्रतिशत महिलाको शरीरमा रगतको कमी ९रक्तअल्पता० हुने समस्या छ । प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा रहेका १५ देखि ४९ वर्षका ६१ हजार २३२ महिलामध्ये २३ हजार ८८० जनामा रक्तअल्पता छ । जिल्ला समन्वय समितिको तथ्याङ्क अनुसार बझाङ जिल्लामा हुने विवाहमा करीब ६५ प्रतिशत बालविवाह हुने गर्छ । उमेर नपुगेका र कुपोषित आमाले जन्माउने शिशु पनि कुपोषित नै हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गतको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका संयोजक हेमन्त शाहीका अनुसार कुपोषित आमाको गर्भमा रहेको बेला पनि बच्चाले आवश्यक पोषण नपाउने र बच्चा झन् कुपोषित हुने भएकाले यो चक्र निरन्तर चल्ने गरेको हो । यस्तो पुस्तैनी चक्र तोड्नका लागि बच्चा गर्भमा रहेदेखि दुई वर्षसम्म खानपानको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नै यस जिल्लामा देखिएको एक प्रमुख चुनौती हो । कुपोषित आमाका कारण बच्चालाई मात्र समस्या हुने नभई आमाको ज्यान पनि खतरामा पर्ने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. अनुप रेग्मी बताउँछन् । रक्तअल्पता भएका महिलाहरूलाई गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा बढी जोखिम हुने गरेको उनको भनाइ छ । “शरीरमा रगतको कमि हुँदा सुत्केरी हुन नसकेर ज्यान जाने खतरा प्रबल रहन्छ” डा। रेग्मी भन्छन्, “सामान्य व्यक्तिको तुलनामा यस्ता महिलाहरूलाई अन्य रोगको संक्रमण पनि बढी नै हुने गर्दछ ।”
यस जिल्लामा कुपोषणको मुख्य कारण खाद्यान्नको अभाव हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस जिल्लामा वार्षिक ११ हजार टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब दुई लाख जनसंख्या रहेको जिल्लामा एक करोड १० लाख किलो खाद्यान्न नपुग हुनु भनेको प्रतिव्यक्ति, प्रति वर्ष ५५ किलो खाद्यान्न अपुग हुनु हो । कुल जनसंख्याको झण्डै ९० प्रतिशत कृषि पेशामा निर्भर यस जिल्लामा निरन्तर काममा जोतिइरहनुपर्ने बाध्यता कुपोषणको अर्को कारण हो । कृषिकर्ममा पुरुषभन्दा बढी महिलाको संलग्नता हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो र बालबच्चाको पोषण र सरसफाइमा पर्याप्त समय दिन नसकेका हुन् । “यहाँका गर्भवती महिलाहरूले व्याउने गाईभैंसीको जति स्याहार गर्छन्, त्यति आफ्नो स्याहार गर्दैनन्” बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका संयोजक हेमन्त शाही भन्छन्, “उसै पनि महिलाहरूको शारीरिक अवस्था कमजोर हुन्छ । त्यसमाथि काममा जोतिने र खानपिनमा ध्यान नदिने भएका कारण आमा र बच्चा दुवै कुपोषित भइरहेको पाइएको छ ।” कृषि कर्ममा व्यस्त हुने भएका कारण नवजात शिशुले आवश्यक मात्रामा स्तनपान गर्न नपाउने र हेरचाह नहुने भएकोले पनि पाँच वर्ष मुनिका धेरै बालबालिका कुपोषणको मारमा पर्ने शाहीको भनाइ छ । कुपोषणको अर्को कारण अन्धविश्वास हो । सुत्केरी अवस्थामा २१ दिनसम्म छाउगोठमा राख्ने भएका कारण चिसो र धुवाँले नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य शुरूदेखि नै जोखिममा हुन्छ । त्यसमाथि बच्चा बिरामी हुन्छ, पातलो दिसा गर्छ भनेर हरियो सागपात र गेडागुडी, दही, दूध, माछामासु जस्ता पोषिला खानेकुराबाट बञ्चित गरिने भएका कारण पनि आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य शुरूबाटै नै कमजोर हुने गर्छ । बझाङमा कुपोषण बढी हुनुको अर्को कारण बालविवाह पनि हो । सानै उमेरमा विवाह गर्ने र निरन्तर सन्तान जन्माउने गर्नाले आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा हेरचाह नपुग्ने भएकाले बच्चाहरू कुपोषित हुने गरेका छन् । महिलाहरू निरक्षर हुनु पनि कुपोषणको अर्को एक कारण हो । “जुन घरमा आमा शिक्षित छन् उनीहरूका बालबच्चाको स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ ।” कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमकी सहजकर्ता विमला विष्ट भन्छिन्, “आमाहरू निरक्षर भएका घरमा अधिकांश बच्चा कुपोषित छन् ।” जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक अनुसार यहाँका करीब ७३ प्रतिशत पुरुषहरू साक्षर छन् भने महिला साक्षरता ४० प्रतिशत मात्रै छ । पोषिला बालीहरू कोदो, कागुनो, फापर, जौ आदिलाई राम्रो नमान्ने र यस्तो प्रकारको खाना खाँदा सामाजिक रूपमा तल परिन्छ भन्ने मान्यताका कारण कुनै बेला प्रशस्त खेती गरिने यस्ता बालीहरू हिजोआज निकै कम लगाइन्छ । खानामा विविधता नहुने र लगातार भात–रोटी मात्रै खाने भएकाले पनि शरीरमा आवश्यक पोषकतत्वको अभाव भई कुपोषण हुने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । बसन्तप्रताप सिंह, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
यी युवतीका यस्ता सेल्फीहरु जसले लिनसक्छ ज्यान, मुटु कमजोर हुनेहरुले कदापी नहेर्नुहोला [७ फोटो सहित]
हेर्नुहोस् गोलभेंडाको युद्ध गरिने यो देश [फोटोफिचर]